နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: သမီးလေး တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ
တယုတယရှိခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး .....
ကိုးလ လွယ်ပြီး ဆယ်လ မဖွားခဲ့ရပေမဲ့
ကျွန်မလက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ထုဆစ်
ပြုစု ပျိုးထောင်လာခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး ......
သမီးလေးနဲ့ မခွဲနိုင်တော့ဘူးရယ် တကယ်
တခါတလေဆို ဖျားနာနေမလား ?
စကားလုံးတွေနဲ့ မလိုတမာ ထိုးနှက်သူတွေကြား
သမီးလေး အားငယ်နေမလား ?
မကြာခဏ ဆိုသလို သမီးလေးဆီပဲ
သမီးလေးမှာ ကျွန်မ မရှိတဲ့အချိန်
စီနီယာ မောင်နှမတွေ ရှိနေလို့သာပဲ........
“ နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ ” ဆိုတဲ့
ဒီနေ့ ( ၁၇.၅.၂၀၁၃ ) မှာ
ကျွန်မ ရင်နဲ့အမျှပါပဲ .........
( မိုးနတ်ရဲ့အိမ်လေးတစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရပို့စ်လေးပါ.........
မှတ်မှတ်ရရလေး ဖြစ်သွားအောင် ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်
သေချာရေးချင်နေခဲ့တာကြာပြီ...ဟိုတလောကမှ စိတ်ကူးရလို့ ထရေးဖြစ်တာ...ဘလော့လေးကလဲ တစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးဆိုတော့
အတော်ပဲပေါ့......ခု တစ်နှစ်ပြည့်လေးမှာ မိုးနတ်ပြောချင်တာက
ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေအားလုံးကို ပိုချစ်သွားတယ်.....
ပိုလေးစားမိသွားတယ်.... နောက်ပြီး ပိုပြီးလဲ အားကိုးမိလာတယ်.....
ခင်တွယ်လာတယ်ဆိုရင်လဲ မမှားဘူးပေါ့ ..............
စပြီးဖွင့်ကာစက မိုးနတ်ကို ဘယ်သူမှ မသိကြသေးတဲ့ အချိန်
တကူးတကနဲ့လာပြီး ဖတ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုးနတ်ရဲ့ စီပုံးမှာ
အရင်ဆုံးလာရေးပေးခဲ့တဲ့ မိုးညွှတ်ခ အရှင် , နောက်ပြီး မိုးနတ်
အပေါ်မှာသိပ်ကောင်းတဲ့ ချစ်ကိုကြီး အကိုလွင်ပြင်
( အကိုလွင်ပြင်ရဲ့ ပထမဆုံးကွန်မန့်လေးက မိုးနတ်ကို
အားတွေအများကြီး ဖြစ်စေခဲ့သလို ဆက်ရေးဖို့လဲ
တိုက်တွန်းပေးခဲ့သလိုပါပဲ ....... အဲ့ဒိအတွက်
မိုးညွှတ်ခအရှင် နဲ့ အကိုလွင်ပြင် (လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်) တို့ကိုလဲ
ဒီပို့စ်လေးကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ပြောပါရစေ..... ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲ မိုးနတ် ကဗျာတွေစာတွေ
အိမ်လေးကို ပစ်မထားတော့ပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်.....
( ကြားလိုက်တယ်နော်...... စီနီယာတွေ ဂျုနီယာတွေ .......
ကတိပျက်ရင်တော့ မိမိုးနတ်ကို အပြစ်ပေးဖို့သာ
အားလုံးပဲ GoOd NiGhT !!!
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:57 AM
Labels: အိမ်လေးရဲ့ အမှတ်တရ (ရောက်တတ်ရာရာ ၀န်ခံချက်များ)
၁ နှစ်မှပြည့် မှသည် နှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာ တည်တံ့ပါစေသား ။။။။။။။။။
Junemoe May 17, 2013 at 7:33 AM
သမီးလေးရေ Congratulations! ပါကွယ်...။ :)
ရည် ဝေ May 17, 2013 at 7:33 AM
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာတည်တံ့ပါစေဗျား)
ရာဇာထွေး May 17, 2013 at 7:34 AM
ဒီထက်မကပိုမိုအောင်မြင်ပါစေလို့အကို ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် ညီမလေးရေ..
နေမင်း May 17, 2013 at 7:42 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ....သမီးလေးကို အမြဲတမ်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ.... :))))
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 18, 2013 at 7:29 AM
Anonymous , ဂျွန်မိုး , မရည်ဝေ , အကိုရာဇာထွေး , နေမင်း တို့ကို
ဆုတောင်းလေးတွေလဲ ပြည့်ပါစေကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး :P
သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ကလေးတစ်ယောက်အမေ-....... ပုံ........ကလေးတစ်ယောက်အဖေ
စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်တော့ သမီးလေးက ရင့်ကျက်သူပါကွယ်း)
အားပေးစကားတွေကို ဘေဘီဗိုက်တာလို့ဘဲ သဘောထားပါနော် :D
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) May 17, 2013 at 8:31 AM
တစ်နှစ်ပြည့်လေးမှသည် နောက်နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်
ဆက်လက်ပြီး ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ ။
ဘလောဒ့်ကို ပစ်မထားဘူး ဆက်ရေးနေမယ်ဆိုလို့ ၀မ်သာလှတယ်ဗျ
ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ခွင့်ရတာပေါ့ နောက်ပိုင်းသိပ်မရေးကြတော့ဘူးလေ
ဟိုအပေါ်က အန်တီစံ ကိုကြည့်ပါလား ဘလောဒ့်ဖုံတတ်နေတာ ကြာပြီး))။
နွေလ May 17, 2013 at 10:16 AM
အော် ... သမီးလေးက တစ်နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပဲ
အင်း ... သူများတော့ သူတို့ရင်နှစ်သည်းချာတွေအတွက်
ဒါပေမဲ့ ခက်တာက သူ မွေးတဲ့နေ့ကို
မမှတ်ထားမိလို့ ဘယ်နေ့လုပ်ပေးလိုက်ရမှန်း မသိ
အော် ... ဘဝ ဘဝ
ဟန်ကြည် May 17, 2013 at 12:27 PM
တကယ့်သမီးလေးအောက်မေ့ပြီး မျက်စိတွေကိုလည်လို့...ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါရဲ့...ကိုယ့်ရင်နဲ့လွယ် နှလုံးသားနဲ့ငုံပြီး မွေးထားရတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေဆိုတာ ကိုယ့်သွေးသားရင်းချာတွေကလား...နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဦးဟန်ကြည်တို့နဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ကြီး ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ညီလင်းသစ် May 17, 2013 at 1:46 PM
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလအထိ ရောက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမရေ...၊
နောင်လာမယ့် နှစ်များစွာမှာလည်း ဆက်ပြီး ပို့စ်တွေအများကြီး တင်နိုင်ပါစေဗျာ....။
မိုးသူ(တောင်ကြီး) May 17, 2013 at 5:20 PM
အဟီးးးးးးးးးး ဘာများတုန်းလို့စိတ်ဝင်တစားပြေးလာတာ မိုးနတ်ရဲ့ 
လရိပ်အိမ် May 17, 2013 at 5:23 PM
သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့။
မိုးငွေ့........ May 17, 2013 at 8:28 PM
ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမငယ်....ဆက်လက်အားပေးနေမယ်နော်... စာကောင်းကဗျာကောင်းများများရေးနိုင်ပါစေ...
အန်တီလေးမေခင် May 17, 2013 at 8:47 PM
ငြိမ်းစိုးဦး May 17, 2013 at 9:56 PM
ပြုစုပျိုးထောင်စောင့်ရှောက်တတ်သူဟာ လောကကို ငြိမ်းချမ်းစေနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း တစ်နှစ်ကနေ စလိုက်သလို ...
နန်းလေပြေနု May 18, 2013 at 5:04 AM
နောင် မွေးနေ့ပေါင်း များစွာအထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ခရီးဆက်နိုင်တဲ့ သမီးငယ်လေး ဖြစ်ပါစေနော်
မဒမ်ကိုး May 18, 2013 at 7:05 AM
နောက်ကျသွားတဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးအတွက် ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ရင်း နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကွယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 18, 2013 at 7:52 AM
ကျေးဇူးပါ ကလေးတစ်ယောက်အဖေရေ...အိမ်မှာ သမီးလေးမျှော်နေတယ်ရှင့်....( စတာနော် * မောင် * )
* မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) *
ဟင် ရဘူး ရဘူးးးးးးးး အန်တီမိစံ * မိစံ *
မီးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေး ခု :P
ဟုတ်လား အကို * မင်းဧရာ * နွေတေးရှင် .....
အကို့ကဗျာတွေလဲ ညီမလေးက မျှော်နေတယ်ရှင့် :)
အော်ဟုတ်သားပဲ လလရေ * မောင်လေးနွေလ *
အမ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ :P
ဟေးးးးးးးးးးး ဦးဦး * ဟန်ကြည် *
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ တကယ်ပဲ ပြည့်ချင်တယ်ကွာ :)))
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 18, 2013 at 8:07 AM
အကိုညီလင်း * ညီလင်းသစ် *
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေနော်....
လေးစားရတဲ့ အကို့ကို ညီမလေးကလဲ
အော် တော်တော်မှကို စိတ်ဝင်စားရှာတာပါလား ကမိုးဒူ
* မိုးသူ (တောင်ကြီး) *
ဟုတ် မမ * လရိပ် * :PPPPPPPPPPPP
မကြီး * မိုးငွေ့ * ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေ :)))
တီလေး * အန်တီလေးမေခင် *
ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးးကမ္ဘာပါရှင် :)))
Thu May 18, 2013 at 10:48 PM
မိုးနတ်သမီးလေးတစ်နှစ်ပြည့်မှသည်..နောင်နှစ်ပေါင်းများစွားတိုင်အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ..အသူကလေးလေးကတော့ ၁၀လကျော်ပဲရှိသေးတာ :P
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) May 18, 2013 at 11:33 PM
သမီးလေး ဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး မမြတ် လန့်သွားတယ် တကယ် တကယ်။
အစအဆုံးဖတ်ပြီးမှပဲ တော်ပါသေးရဲ့လို့ ..
ဘလော့လေးကို တစ်နှစ်ပြည့်ကနေ နောက်နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး စာကောင်းပေမွန်ပေါင်းများစွာကိုလည်း မွေးဖွားထုဆစ်နိုင်ပါစေလို့ မမမြတ် လေးလေးနက်နက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ် ညီမလေးရေ။
witch83 May 19, 2013 at 4:13 AM
သမီးလေးဆိုလို့ နည်းနည်းတောင် အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ ကဗျာဆုံးမှ ဘလော့အိမ်လေး တစ်နှစ်ပြည့်မှန်း သိတော့တယ်။ တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတုိုင် ကဗျာလှလှ၊ စာလှလှ၊ ကဗျာကောင်း၊ စာကောင်းလေးတွေ ထုဆစ်နိုင်ပါစေ မိုးနတ်ရေ..း)
ထရီဆာ (Teresa) May 19, 2013 at 8:29 PM
သမီးလေးလို့ တင်စားထားတာလေးက အနှစ်ရှိလိုက်တာ၊ ဒီ အသုံးအနှုန်းကြောင့် မိုးနတ်လေး ဘလော့ဂ်အပေါ် ဘယ်လောက် တန်ဘိုးထားတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေတာပဲကွယ် ....
ဘလော့ဂ်တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်များစွာ တည်တံ့ပါစေလို့ ....
(ခရီးသွားနေတာနဲ့ အခုမှပဲ ဆုတောင်းဖြစ်မိတယ် ညီမလေး မိုးနတ်ရေ.. ) :)
PhyoPhyo May 20, 2013 at 12:44 AM
တစ်နှစ်မှနှစ်များစွာ ကဗျာတွေ၊ စာတွေအများကြီးရေးဖွဲ့သီကုံးနိုင်ပါစေ ညီမရေ
မြသွေးနီ May 20, 2013 at 1:47 AM
ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာဖြင့် သမီးလေးကို ဒီထက်ပိုပြီး အလှသွေးခြယ်နိုင်ပါစေ..။
hninnse young May 20, 2013 at 4:33 AM
ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) May 20, 2013 at 1:18 PM
သမီးလေးဆိုလို့ ငါ့အစ်မက ကလေးတောင်မွေးပြီးပါရောလားလို့ တွေးနေမိတာ။
roseayemaung May 20, 2013 at 1:41 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 21, 2013 at 8:10 AM
ကျေးဇူးပါ * အသူ * ရေ....
အသူ့ကလေး တစ်နှစ်ပြည့်ကျရင် မိုးနတ်ကလဲ
ဟီးးးး မမြတ် * မြတ်ပန်းနွယ် * လန့်သွားတယ်ဟုတ် !!!
စိတ်ပူအောင်လုပ်လိုက်မိလို့ ဆောရီးပါ မ ရေ...
ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါရှင်..... :)))
မမ * witch83 * ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ :)
အိုးးးးးးးးးးးး မမ * ထရီဆာ *
ညီမလေးရဲ့ ရင်ဘတ်ကို မမက တိုက်ရိုက်မြင်နေတာပဲနော် :)
အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိသလို မမကိုလဲ ပြောမပြတတ်အောင်ကို
ကျေးဇူးတင်မိပါအိ ......ဒါထက် မမ ဘယ်ကို ခရီးသွား
မမဖြိုးဖြိုး * Phyo Phyo Hlaing (my world) *
ညီမလေးဆီ လာဆုတောင်းပေးတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ မ ရယ် ...
ကျေးဇူးလဲ အရမ်းတင်ပါတယ်ရှင် :))))))
အလွမ်းမြို့ May 21, 2013 at 10:07 AM
သမီးလေး ၁ နှစ်ပြည့် ကိတ်မုန့်လည်းကျွေးဘူး။ အဟီး..
မကြီးလွမ်းရောက်ခဲ့တယ်နော်။ မကြီးလည်း ဘလော့ပစ်ပြီး ဘယ်တွေရောက်မှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသိတဲ့ ဘဝ။ တောလည်ရင်း လမ်းပျောက်သလိုဖြစ်နေတာ။ ခုတော့ ကိုယ့်ဌာနေလေးကို ပြန်ရောက်ပါပြီ။နောက်ဆိုအမြဲလာဖြစ်တော့မယ်။ မိုးနတ်မေးတဲ့ ဆပ်ပြာတံဆိပ်လေး ဒီမှာရေးပေးခဲ့မယ်နော်။ စလုံးမှာလည်း
အဲဒီဆပ်ပြာလေးရှိတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။အဆင်ပြေမဲ့သူဆို တကယ်သိသာပါတယ်။မကြီးဆို အခု ဆပ်ပြာနဲ့ သစ်ပြီးဘာမှကို မလိမ်းပစ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကလို မဲတာတွေပါးကုန်ပြီးအသားလေး ပိုဖြူလာတယ်။ (IMPERIAL - LEATHER) ၆တုံး ၁ ထုပ်ပါ ညီမလေး။ ၆ တုံးအိတ်ကတော့
အနီနဲ့အဖြူ ၂ရောင်စပ်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ
မိုးသက် ဦးလွင် May 21, 2013 at 2:15 PM
ဘလော့ကို ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်.. အစ်မမိုးနတ်ရေ..။ ၁ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အထိ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပုံမှန်စာရေးနိုင်တဲ့သူမို့ လေးစားမိပါတယ်.။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း များကြီးရေးနိုင်ပါစေလို့..:)
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 22, 2013 at 5:22 AM
ဟယ် ဆရာမ * မမမြသွေးနီ *
မိုးနတ်ဆီ အလည်လာပြီး ဆုတောင်းပေးတယ်နော် :)
မိုးနတ် တကယ်ကို ရှော့ခ် ရသွားတယ်....:P
မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး မ ...ဒါပေမဲ့
မိုးနတ် အရမ်းပျော်ပါတယ်ရှင် :)))
ကျေးဇူးလဲ အများကြီးတင်ပါတယ်နော် ....
မဟုတ်တာ နှင်းဆီရယ် * နှင်းဆီရောင် *
မိုးနတ်ကတောင် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ :)))
ဆရာမိုး * ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) *
ချာမိုးကလဲ အတွေးတွေ ဝေးနေပြန်ပါပြီ....
ဝေးဝေးကို သိပ်မတွေးနဲ့ ဆရာလေးရ.....
စဉ်းစားပါ နောက်ဆို ဟီးးးးးးဟီးးးးးးးးးးးး
တကယ်လား ရို့စ် ??? * roseayemaung *
ဟုတ်ပါ့ မကြီးလွမ်းရယ်... * အလွမ်းမြို့ * ဘာစားချင်လဲပြော ....
ညလေးကျွေးမှာပေါ့ဟယ် ( လေနဲ့ကျွေးနေတာ ..လိုင်းပေါ်မှာ ဟီးးးးးး )
စတာပါ မ .....အပြင်မှာတွေ့မှ တကယ်မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်နော်...
ဒါထက် အမ အိမ်လေးဆီပြန်လာတယ်ဆိုလို့ ညလေးသိပ်ကို
၀မ်းသာမိတယ်.....ဖဘဘက်မှာပဲ လူစည်နေပြီး ညလေးတို့
အဲဒါ ညလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့....ကိုယ်လဲ သူများတွေ
နည်းတူဆိုတော့ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ငြိမ်နေရတယ်...:PPPPPPP
အမပြောတဲ့ ဆပ်ပြာ ညလေးသိတယ်...အဲဒါက ရိုးရိုးဆပ်ပြာမဟုတ်လား?
ဒါပေမဲ့ အဲလို သိပ်အထူးတလည်မဟုတ်တာတွေနဲ့ပဲ ပျောက်သွားတဲ့
အခုထက်တော့ ပိုမဆိုးသွားလောက်ပါဘူး မ ရယ်...:)
မ ကိုလဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ....အာဘွားးးးးးးးးးးးး ချစ်မ
သိပါတယ် မောင်မိုးသက်ရယ်....:) * မိုးသက်ဦးလွင် *
မင်း ဖဘ မှာ ခြေရာချင်းထပ်အောင် လမ်းသလားနေမှန်းးးးးးးး ( စတာနော် မောင်လေး )
အမကို တလေးတစားနဲ့ ရှိတဲ့အတွက်ရယ်....ဆုတောင်းလေးရယ်အတွက်
အမကလဲ မင်းကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဟယ် .....
ရင်ခုန်ရသူ May 23, 2013 at 9:43 PM
မမိုးနတ်ရေ ဖတ်တာနောက်ကျသွားတယ်ဗျာတောင်းပန်ပါတယ်နော် မမိုးနတ်ရဲ့ပသမီးလေး
တံခွန်အလင်း ပြန့် သင်ပါစေနော်
လှမင်း အုန်းသာ May 24, 2013 at 5:39 AM
ကဗျာအရေးအသား ခံစားချက်တွေ အရမ်းကောင်းတယ်နော်..
မိုးနတ်ကြယ်စင် May 25, 2013 at 9:24 AM
ကျေးဇူးပါကွယ် ရင်ခုန်လေးရယ် * ရင်ခုန်ရသူ *
ဟုတ် ရှဲရှဲနိ * ကိုလှမင်း အုန်းသာ *
လရိပ်အိမ် June 1, 2013 at 1:09 AM
ရင်လှိုင်းခတ်သံ June 12, 2013 at 9:43 AM
မိုးနတ် က သမီးလေး ကို အရမ်းချစ်တာပဲနော်...။ လေးစားမိတယ်..။
မိုးနတ်ကြယ်စင် June 14, 2013 at 6:28 AM
ဟုတ် မမ * လရိပ်အိမ် *
အင်းး * ရင်လှိုင်းခတ်သံ * လဲ နောက်ဆို
အပျောက်မခံနိုင်အောင် ဖြစ်တော့မှာ :))))
ကောင်မလေး ....... ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်လောက်အောင်ကို လှတဲ့ ကောင်မလေး.... နှုတ်ခမ်းလေး နီထွေးထွေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး..... ...
အရင်ဦးဆုံး သတိထားမိတာက တည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ မင်းမျက်နှာ.... နောက်တော့မှ တစတစ... ပိုရင်ခုန်သွားမိတာက .... မာနကြီးပြီး အေးစက်နေတဲ့ မင်...
အစကတည်းက......... အနှောင်းမသေချာခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း... ငိုရမယ်မှန်းသိခဲ့ရင် ငါမစခဲ့ပါဘူး.....။. အစကတည်းက.......... ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ မပ...
ခန်းဆီးလိုက်ကာစတွေ အရောင်မှိန် အိမ်အိုလေးလဲ ဟောင်းခဲ့ချိန် မပြောင်းလဲပဲ အရင်အတိုင်း ရှိနေတာက ငါ့နှလုံးသား မင်းအကြောင်း တွေးလို...
ငါလေ မင်းရဲ့အပြုံးကို စတွေ့ကတည်းက....... ကဗျာတွေ ရေးတတ်ခဲ့တာ... နွေးထွေးတဲ့ မင်းရဲ့အကြည့်တွေကလဲ ငါ့အတွက် အင်အားတွေဖြစ်စေခဲ့လို့.....
Individual Phyllo Apple Walnut Pies Blogging Over Thyme